REPUBLICADAINIK | पैसा देखाएर ‘उत्ताउलो’ हुनुभन्दा यसरी संस्कार सिक्ने कि ? - REPUBLICADAINIK
पैसा देखाएर ‘उत्ताउलो’ हुनुभन्दा यसरी संस्कार सिक्ने कि ?
काठमाडौं । तिहार मनाउने क्रममा केही व्यक्तिले भड्किलो बनाउँदा त्यसको सामाजिक, सांस्कृतिक र धार्मिक गरिमामा ह्रास आएको टिप्पणी हुन थालेको छ ।
तिहारको तेस्रो दिन शनिबार साँझ देशभरि हिन्दूधर्मालम्बीहरूले धनधान्यकी देवी लक्ष्मीको पूजाआरधना गरेर पर्व मनाएको छ । लक्ष्मीलाई घरमा भित्र्याएका छन् ।
सामाजिक सञ्जाललाई लक्ष्मीपूजाको तस्वीरहरूले रमाइलो बनाएको छ । हेर्न लायक बनाएको छ ।
तर, केही व्यक्तिले लक्ष्मीपूजा गर्दा पैसाले भरिएको थाली, सुनका गरगहना राखेका छन् । हजार र पाँच सयका नोटभन्दा साना नोटनै राखेका छैनन् । यसरी नोटले भरिएको थाली, पैसा वा सुनका गरगहना देखाउँदा त्यसले असुरक्षा बढाउने भनाइ प्रहरीको छ ।
अनिलकेशरी शाह नाम चलेका प्रतिष्ठित व्यक्ति हुन् । नबिल बैंकका कार्यकारी अधिकृत शाहले पनि लक्ष्मीपूजा गरेको तस्वरी सामाजिक सञ्जालमा राखेका छन् । तर, उनले लक्ष्मीपूजा गर्दा पैसा देखाएका छैनन् । लक्ष्मी माताको मूर्तिलाई फूलैफूलले पूजा गरेको तस्वीर सार्वजनिक गरेका छन् ।
पैसा नै देखाएको तस्वीर सार्वजनिक गर्ने हो भने शाहले कतिसम्म देखाउने सक्ने थिए होला ? शाहले त्यसो गरेका छैनन् । उनले धार्मिक परम्परा र विधिअनुसार साधारण तरिकाले लक्ष्मीपूजा गरेका छन् ।
एक जना मोडलले पनि लक्ष्मीपूजा गरेकी छिन् । ती मोडलले सामाजिक सञ्जालमा पूजा गर्दै गरेको तस्वीर पोष्ट गरेकी छिन् । उनले पैसाले भरिएको दुई वटा थाली देखाएकी छिन् । त्यतिले भएन भनेर उनले दुई ठाउँमा पैसाको थुप्रो लगाएकी छिन् ।
ती मोडललाई त्यति धेरै पैसा कहाँबाट आयो यो प्रश्न पनि उठ्न सक्छ ? त्योभन्दा पनि ठूलो कुरा कुनै चोरले त्यो तस्वीर देखेको रहेछ भने ढोका फोडेर चोर्‍यो भने वा अपराध गर्‍यो भने को जिम्मेवार हुन्छ ?
यी दुई उदाहरण यस कारण दिइएको छ कि लक्ष्मीपूजा गर्दा होस् वा पर्व मनाउँदा धनसम्पत्ति देखाएर प्रतिस्पर्धा गर्नेभन्दा पनि विधि, पद्धति, संस्कार र परम्पराअनुसार गर्दा त्यसको मिठास अर्कै हुन्छ ।
पर्व भनेको परिवारमा सुःख, समृद्धि र भावनात्मक एकता ल्याउनका लागि मनाइने हो । पर्वले बिग्रह वा अपराध निम्ताउनु हुँदैन ।
अनिलकेशरी शाहले लक्ष्मीपूजा गर्दा सार्वजनिक गरेको तस्वीर
ती मोडलले लक्ष्मीपूजा गर्दा सार्वजनिक गरेको पैसाको थुप्रो
Published : Sunday, 2020 November 15, 9:11 am